Kungani kukhona ubuhlungu phakathi izindwani ehlombe?
Ubuhlungu phakathi izindwani ehlombe - ke siwukubonakaliswa lalivamile emtholampilo. Kufanele kuqashelwe ukuthi zingase zibe Indlela ezihlukahlukene izifo ezahlukene. Umbhali wayevame ukunezela lokhu imbangela emizweni ezifana zitholiwe ngasekupheleni. Lokhu kuholela kunalokho eside futhi ehlaziya ukusetshenziswa obuhlukahlukene yokwelapha eyinkimbinkimbi. Ngakho-ke akuyona ukukhomba, kungani ubuhlungu emuva phakathi izindwani ehlombe, kubalulekile kubala uhlu olude izifo, izimpawu kule uphawu.
Izimbangela kabi engxenyeni engenhla interscapular emuva
Ubuhlungu phakathi izindwani ehlombe kuyahluka ngempela ezihlukahlukene. Kungenzeka oyingozi futhi abukhali, kanye kungenziwa ezidabukile, esingelapheki noma okuncane. Ezimweni ezingavamile, lezi emizweni zenzeka umuzwa umthwalo ngemuva, uqweqwe lukashukela kukhasa "Ukugodola" noma ukuba ndikindiki evamile. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi zonke lezi zimo ubuhlungu phakathi izindwani ehlombe uhlale buyinto kabi ungakhululekile, okuyinto has a nethonya elikhulu ekuphileni komuntu.
Izinto eziyinhloko ezibanga ubuhlungu obunjalo:
ukungabi oluphelele iyiphi kokuvivinya umzimba (isib, inkokhiso aphansi, izifundo echibini noma ejimini, njll ...);
ephakamisa abukhali izinto ezisindayo, egijima, ukweqa, njll (ikakhulukazi uma izenzo ezinjalo zenziwa ngumuntu ongaqeqeshiwe) ..;
njengoba umuntu kungaba akhononde neqiniso lokuthi wayeseholela njalo libuhlungu phakathi izindwani ehlombe ngemuva kokuthola ukulimala ehlukahlukene (uwela, amagalelo ngemuva, emuva kokuthola ingozi yemoto, nokunye. d.).
Esimweni lapho zonke izizathu ngenhla ngalutho-ke, cishe, lokhu uphawu kusikisela ukuthi ugula. Ukuze uqonde ukuthi izifo kungabangela ubuhlungu obukhulu noma ngokulambisa lizwakale phakathi izindwani ehlombe, cabanga uhlu ngokuningiliziwe:
osteochondrosis yomgogodla, okubamba iqhaza sebethule ezibalulekile ngokweqile-calcium nosawoti emalungeni;
umonakalo mechanical kuya izakhiwo yomgogodla wesibeletho noma thoracic (ukuphambuka ezinjalo kungenzeka ngenxa dislocation, contusion, ukuwa ezindaweni eziphakeme, nokunye.);
ukugobeka komhlandla kabuhlungu emgogodleni wesibeletho noma thoracic ezivame ukuvela ngenxa ukuma ungakhululekile uhlezi, behamba, nokunye d..;
kyphosis, noma kunalokho, ngokweqile ugobile yomgogodla esigabeni layo elingenhla;
kyphoscoliosis, okungukuthi disorder ukuma, okuyinto ibangelwa inhlanganisela ugobile ikholomu umgogodla kwesobunxele noma kwesokudla nge kyphosis esifundeni thoracic;
spondylarthritis, elisho osteoarthritis;
idiski protruded e ikholomu umgogodla, okungukuthi esifundeni thoracic (ngamanye amagama, disc herniated, okuyinto wasesikoleni usanda kuqala ukuthuthukisa).
Futhi izinto ezibangela ubuhlungu phakathi izindwani kungaba lumbago thoracic futhi wesibeletho, neuralgia intercostal, periarthrosis humeroscapular, ischemic isifo senhliziyo, isifo esithathelwanayo, zokugula izitho mediastinal, noma wamaphaphu pleura (pleurisy, inyumoniya) futhi t. D.
Uma izinyawo njalo abandayo
Njengoba isilwane ezifincizekile ezifana nezimpiko isiketi?
Yablonya Bryansk: incazelo yezinhlobonhlobo nokunakekelwa kwesihlahla
Izinja ukuthi ningachithi futhi akusho ukuhogela
Carbohydrate fecal nezinye ucwaningo ebalulekile